Kaominina Antananarivo Renivohitra , omaly alatsinainy. Niara-nientana tamin’ny fanatontosana izany ny Direction des Travaux Publics (DTP), ny Equipe Spécialisée d’Assainissement (ESA), ny SAMVA ary ny ekipa teknika ao anatin’ity Boriborintany iray ity. Lakandrano manodidina ny 100 m no nodiovina, asa haharitra dimy andro, hitohy hatrany Avaradoha. Araka ny nambaran’Andriamatoa Andrianaivojaona Lova Minoharisoa, Chef de service Tehnique eo anivon’ny Boriborintany fahatelo dia fanombohana ihany izao asa izao hanamaivanana ny fahasahiranan’ny mponina ny amin’ny mety ho fiakaran’ny rano, indrindra fa ny eny Besarety sy ny manodidina. Maharitra ora roa mantsy ny rano eny vao ritra rehefa avy ny orana. Efa misy hatrany ny asa fanadiovana tanterahin’ny kaominina eny an-toerana saingy tsy ampy. Miantso ny rehetra mba tsy hanary fako anaty tata-drano ny Boriborintany fahatelo fa hanatona hatrany ireo dabam-pako lehibe ireny.